I-WatchOS 8 ityhilwe eWWDC 2021 | Ndisuka mac
I-WatchOS 8 ityhilwe eWWDC 2021
UToni Cortes | 07/06/2021 21:25 | Apple Watch, Ezahlukeneyo
Umnyhadala wenkomfa ye-Apple yabaphuhlisi, abadumileyo WWDC, Ukuhambisa iindaba esiza kuzibona kulo nyaka kwisoftware yezixhobo ezahlukeneyo zenkampani.
Y i-watchOS 8 inecandelo layo elikhethekileyo. Zininzi izinto ezintsha ezinikwa isoftware yeApple Watch. Masithi akukho zinto zichaphazelekayo kubasebenzisi, kodwa kukho uphuculo oluncinci xa kuthelekiswa nohlobo lwangoku. Masibone ukuba basichazeleni.
UApple usandul 'ukuveza iindaba esinokuthi sizibone kulo nyaka kwi-watchOS 8. Akukho nanye ekhwankqisayo, kodwa kuyavunywa ukuba imisebenzi emincinci emincinci iyabandakanywa ukuze ikwazi ukonwabela ngakumbi nangakumbi ukubanakho okunikezelwa yi Apple Watch.
Isicelo sokuphefumla siqhubeka nokuphuculwa. Ngoku ibizwa ngokuba yiNgqondo, ayixhomekekanga ekuphefumlweni kuphela, kodwa iyanceda ngamaxesha apho kufuneka uphefumle kwaye kucamngca. Ngokumalunga nokuphefumla, ngoku unokulinganisa umyinge wokuphefumla ngelixa ulele. Inqaku elinomdla elongezwa kulandelelo lokulala.
Amanqanaba anemvelaphi yefoto ngoku anokubandakanya ubunzulu ukuba usebenzisa ifoto kwimowudi ye-portrait. Uhlelo lokusebenza lweefoto luye lwenziwa uphuculo olunomdla, longeza amanqaku aphezulu kunye neenkumbulo. Ngoku ungabelana ngeefoto zakho kwi-Apple Watch neMiyalezo okanye ngePosi.
Enye into encinci enomdla kukuba xa uthumela umyalezo obhalwe ngesandla, ungabandakanya a emoji. Ukusuka kwiMiyalezo, ungakhangela umfanekiso oza kuwuthumela, kwaye ube nokufikelela ngokukhawuleza kwiifoto.
Ekugqibeleni izinto zibandakanyiwe kwisicelo sokukhangela. Ngoku unokufumana eyakho I-AirTag Ukusuka kwiApple Watch. Kubalulekile ukuba uhamba newotshi yakho ye-LTE kwaye ungayiphathi i-iPhone kunye nawe.
Basibonisile nokuba isicelo seMozulu sisibonisa njani ukuba kuyakubakho imvula kwiyure ezayo. Kuya kufuneka silinde ukubona ukuba olu lwazi luya kufumaneka na kwilizwe lethu. Nge-watchOS 8, unako yabelana ngomculo wakho Ukusuka kwiApple Jonga ngokusebenzisa iNkqubo yeMiyalezo.
Ngokomgaqo, olu luphuculo olusandula ukuboniswa kuthi kwigama eliphambili elisandula ukuphela. Kuya kufuneka silinde ukuzama ezokuqala ukubheja ukubona ukuba kukho ezinye iindaba ezingakhange zisibonise namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-WatchOS 8 ityhilwe eWWDC 2021
Sikubonisa indlela yokuyibukela kwakhona intetho yeWWDC 2021 kwakhona
Igosa elitsha leMacOS Monterey ngeendlela ezimfutshane, uLawulo lweNdalo iphela kunye nokunye